Ny fahasamihafana eo amin'ny Tags Tags 18000-6C ary ny tag 18000-6BISO 18000-6B TagsISO 18000-6C Tags
Amin'izao, ny mpamaky UHF RFID mahazatra sy ny maody RFID dia manana fenitra roa hisafidianana, dia ny ISO18000-6B ary ISO18000-6C (EPC Class1 Gen2) fitsipika. Ireo fenitra roa ireo dia azo lazaina fa manana tombony manokana, koa inona ny fahasamihafana?
1. ISO18000-6B dia afaka mamaky hatramin'ny 10 tag amin'ny fotoana iray, betsaka ny data data an'ny mpampiasa, ny tahan'ny fifindrana data dia manodidina ny 40Kbps. Ny marika ISO18000-6B dia matetika ampiasaina amin'ny faritra mihidy mihidy, toy ny fitantanana fananana.
2. Ny EPC C1G2 dia ISO18000-6C, izay afaka mamaky takelaka an-jatony miaraka amin'izany, kely ny sehatry ny angona mpampiasa, ary ny tahan'ny fifindrana data dia 40Kbps-640Kbps. Ny marika ISO18000-6C dia matetika amin'ny faritra misokatra malalaka, toy ny fitantanana lojika.
Ny toeran'ny fahombiazan'ny ISO 18000-6C dia ny fanamafisana ny haben'ny angon-drakitra ao amin'ny tag pasifika, izay fomba fifandraisana fifandraisana fohy mahazatra. Amin'izao fomba izao, raha mbola miovaova avy hatrany ny fepetra famindrana angovo eo amin'ny radio eo anelanelan'ny famandrihana sy ny antenne mpamaky, Vita tsara ny fifandraisana, noho izany dia nihatsara be ny tahan'ny fankatoavana raha oharina amin'ireo moto passive teo aloha. Atambatra amin'ny fampahafantarana marobe maromaro, mekanika fanoherana ny fifandonana, modely mpamaky mpanoratra matevina, ny kaonty mangarahara sy ny angon-drakitra tsy miankina, Izy io dia manome fomba fampidirana mahomby tsy misy fifandraisana ho an'ny lozisialy maro samihafa izay asehon'ny lozika.
ISO18000-6C dia manana faritra data manokana. Amboary fotsiny, ireo mpampiasa manana ambaratonga maherin'ny iray tapitrisa ihany no afaka misafidy ny angon-drakitra tsy miankina rehefa mibaiko. Ity koa dia paikady tsenam-barotra ho an'ny ISO18000-6C ho an'ny fangatahana faobe, mba hanivanana ny fampiharana tsy ara-toekarena (sady tsy ara-toekarena ny famatsiana sy ny tinady). Amin'ny fampiharana mahazatra, io faritra misy angon-drakitra io dia afaka harovana amin'ny hidin'ireo teny roa mifehy ny Access and Kill. Raha vao nohidiana, tsy ho hita raha tsy misy teny mifehy, ary tsy azo vakiana izany raha tsy fantatrao ny AccessPWD. Ny KillPWD dia manana 32bits, ary 32bits AccessPWD dia ampy ho fanoherana ny hosoka. Betsaka ny marika eny an-dalambe nikiakiaka fa Gen2 izy ireo, izay tena ID fotsiny an'ny ISO18000-6C. Tsy afaka manome ny fiasan'ny Gen2 rehetra izy, indrindra ireo asa tsara ireo, toy izany koa ny mpamaky. Ao amin'ny Gen2, misy loharanom-pahalalana manokana an'ny mpampiasa 64Byties. Ho an'ny mpampiasa mihoatra ny iray tapitrisa, tsirairay baiko eto amin'ity faritra ity dia azo hidiana avokoa, mamaky ihany, Vakio-soraty, ary ny famakiana dia voarara tsy misy fanalahidy. Tena vokatra tsara.
—- raha mila milaza ny fifandraisana misy eo amin'ny ISO18000-6C sy Gen2 ianao, mazava, ISO18000-6C dia sombin'ny Gen2. Ny Gen2 dia manana ny fiasa sy ny scalability, izay tsy azon'ny ISO18000-6C.
3. Ho an'ny fitahirizana angon-drakitra, ISO18000-6B dia ao amin'ny “Eo anoloana” endrika, araka izany ny haben'ny bara; Ny ISO18000-6C dia ao amin'ny “lafika” endrika. Rehefa mamaky ny tag, mila mamaky ny EPC ianao ary avy eo vakio ny angon-drakitra ao anaty tag miaraka amin'ny fifandraisana amin'ny angon-drindrina, ambany ny fepetra takiana amin'ny fahaiza-manao tag.
4. Fahasamihafana eo amin'ny vidiny: Ny marika ISO18000-6C dia mora kokoa noho ny marika ISO18000-6B, mampihena ny saram-pampianarana ataonao.
Prev: Tombony ny JCOP4 andian java-karatra (J2R110|J3R110|J2R150|J3R150|J3R180) eo amin'ny sehatry ny Electronic ID karatra